Haweenka Somalida ee ku barakacay dagaalada ismaamulka oo diidey qorshe lagu ilmo tirayo: WARBIXIN - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Nimco waa haweenay Somali ah oo ka barakacdey dagaalada u dhexeeya Oromada iyo Somalida ee ay ka dambeeyeen Tigreega iyo maamulka Oromada oo rabay dhul balaarsi. Nimco ayaa hadda ku jirta xero qaxooti.
Waxa xeradaas timi hay’ad gaalo ah oo isku sheegta qaramada midoobey laakiin qorshaheedu yahay inay haweenka kala dagaalanto dhalmada. Daawoooyinka dhalmo joojinta ayaa laga qaadaa xanuuno badan.H
Hay’adan oo inta badan danahooda ay ku fushadaan gaaladu maadaama ay bixiyaan lacagaha lagu fulinaayo siyaasadaha gaarka ah sida in caadi laga dhigto KHANIISNIMADA ayaa xerooyinka gaysay daawooyin khatara oo ay ku jirto mida dhalmo goysta.
Nimco ayaa iyadu sheegtay in iyadu diidey inay qaadato daawooyinkaas oo loo sharaxay inta nooc ee ay kala yihiin oo kan ugu fudud uu yahay caaga ragga isticmaalo.
”Anaga dhibka na haysta maaha in aan dhalmo la dagaalano ee waa in deegaankayagii nolol ku helno taasna ma aragno cid wax ka qabanaysa ayay tiri Muxubo Maxamed oo iyadu haysata afar caruura kuna jirta xerada.
Waxa ku jirta haweenay iyadu raacdey talada gaalada oo diidey inay ilmo dambe dhasho oo ninkeedu furey, haddana haweenka kale ku dhiirigelinaysa inay sideeda sameeyaan.
Hay’adan oo lagu magacaabo UNFPA ayaa si khaasa u dhiirigelisa kobcinta fikradaha KHANIISIINTA ayagoo isticmaalaya erayga GENDER kana guuraya erayga saxda ah ee NIN IYO NAAG.
Waxay hay’adu lacag ka heshay Denmaak iyo safaarada Jabaan waxana lacagtaasi loo isticmaaley in lagu soo gado 14,400 qalab oo intuba yihiin kuwa dhalmada ka hortaga halka inyar oo indha sarcaada lagu soo gadey bustayaal.
”Markasta oo aan raashin doonano waxa nala weydiiyaa haye daawooyin ma rabtaan maka soo fikirteen ayay tiri Nimco. Shaki Kuma Jiro in qoysku kala koriyaan caruurta hadana dhaqankeena baadiyaha ayaaba ah in labadii sanoba mar la dhalo ayay tiri Muxubo Maxamed.
Taas oo Meesha ka saaraysa in daawooyin kale loo baahdo.